မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): CB Bank ရဲ့ အချက်လက်တွေကို ဒီဆော့ဝဲလေးထည့်တာနဲ့ အဆင်ပြေပါပြီ
CB Bank ရဲ့ အချက်လက်တွေကို ဒီဆော့ဝဲလေးထည့်တာနဲ့ အဆင်ပြေပါပြီ
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ ကမ္ဘောဇဘဏ် ဆော့ဝဲလိုပဲ ဘဏ်တွေရဲ့ လိပ်စာ ၊ ဖုန်းနံပတ်
တည်နေရာကို မြေပုံလမ်းညွှန်နဲ့ ပြပေးပါတယ် ။ ကမ္ဘောဇလောက်မစုံပေမယ့် ဒီဘဏ်
ကို အသုံးပြုတာများတဲ့သူတွေ၊ရုံးသမားတွေအတွက် ဖုန်းတစ်လုံးရှိတာနဲ့အဆင်ပြေ
ကောင်းမွန်တဲ့ ဆော့ဝဲတစ်ခုပါ လိုအပ်သူများ သုံးနိုင်စေဖို့မျှဝေလိုက်ရပါကြောင်း.....။
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ - CB Bank App for Android ( Mediafire )
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ - CB Bank App for Android
This is everything about CB Bank information for all branches location and bank interest rate calculation. You may find out easily details info of each branches with Google Map as well.
Labels: Phone အတွက် Bank ဆော့ဝဲ